Ny sandry fahatelo an'i 'Sam' amin'ny asan'ny solon'i Jane Radstrom | Famoronana an-tserasera
Mikatsaka foana isika marika, fantaro ary ny antony amin'ny zavatra rehetra manodidina antsika. Manandrana mahatakatra sy mahatakatra izay tsy ananan'ny olon-tsotra na izay takatsika ho mahazatra isika. Indraindray io fanambarana io dia mahavita manadino ny zava-misy eo alohantsika ary matetika izany dia mitranga amin'ny zavakanto.
Toy ny hoe vokatra avy amin'ny fivarotana lehibe izy io, izay ilazan'ny marika anao ny vidiny, ny fanondroana ny niandohany sy ny firafiny, amin'ny asa maro dia mitovy ihany ny fomba fandefasana izay takatra. ny mpanakanto mihitsy dia tsy te-hahatakatra antsika. Andao holazaina fa avelanao toy ny ankehitriny, toy ilay sandry fahatelo izay hosoratan'i Jane Radstrom amin'ity sanganasa kanto antsoina hoe 'Sam' ity.
Raha jerena voalohany ny sanganasa dia mankany amin'ny ankapobeny isika dia ny sary hosodoko amin'ity artista ity. Hitanay ny matsiro, ny paozy sy ny menaka fa, na dia mitady zava-misy aza izy, dia mitoetra ihany ny maneho amin'ny fomba hafa ny fitoniana sy ny fahalemen'io zazavavy io niankohoka teo am-pandriany.
Mandeha amin'ny antsipiriany izahay ary efa ao anatin'izany fikatsahana fanapahan-kevitra izany ary inona no tsy mifanaraka amin'ny firafitra, izany tanana fahatelo izany. Izahay dia mitady valiny haingana, ny hoe te hampiseho fihetsiketsehana ianao na eo anelanelan'ireo toerana samihafa ireo rehefa matory ianao dia ho hitanao ilay iray hafa izay mety tsara indrindra rehefa matory ora tsara ianao.
Izahay dia efa miaraka amin'ny marika sy miahiahy amin'ny antony sy ny antony isika amin'ity sandriny fahatelo ity, fa raha mijery ny sangan'asany sisa isika, dia fantatsika fa ny iray amin'ireo tanjon'ity mpanakanto antsoina hoe Jane Radstrom ity dia ny fampisehoana indroa amin'ny ankamaroan'ny sangan'asany.
nitranga ho an'ny tranonkalanao hahalala ny sisa amin'ny hosodoko amin'ny menaka ary manadino anao foana amin'io fomba mampivadi-po io hampahafantatra ny maodelin'izy ireo.
Manana isika menaka hafa avy amin'ity fidirana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sandry fahatelo amin'ny hosodoko menaka Jane Radstrom 'Sam'